आया बाख्रा दोर्याउँदै स्कुलमा, प्रअ माइन्यूट बोकेर घरघरमा | नुवागी
आया बाख्रा दोर्याउँदै स्कुलमा, प्रअ माइन्यूट बोकेर घरघरमा
हरिसुन्दर छुकां / भक्तपुर २८माघ। पौने दश बजे विद्यालय पुग्दा ४ जना विद्यार्थीहरु चौरमा खेलिरहेका थिए । उनीहरु आफैले कक्षा खोलेको उनीहरुले बताए ।
दश बज्न पाँच मिनेट भएको बेलामा सो विद्यालयमा काम गर्ने आया दिदी(पियन) बाख्रा दोर्याउँदै स्कुल आए, अनि अफिस कोठा खोलिन् ।
अफिस खोल्दा सम्म कोही शिक्षक आइपुगेका थिएनन्। घडीले दशबजेर ५ मिनेट नाघ्दा एकजना मिस देखिइन् । ‘ऊ आउनुभयो, रोशनी मिस ।’ पियनले भनिन् ।
‘मिस कक्षा कति बजेदेखि हुने हो ?’
‘सवा दशबजेदेखि हो ।’
‘कक्षा हुनुभन्दा अघि के के हुन्छ ?’
‘बच्चाहरुलाई लाइनमा राखिन्छ, अनि…’
‘अनि दश बजेर पाँच मिनेट भइसक्दा पनि अरु शिक्षक देखिँदैनन् नि ?’
‘म आफू त पौने घन्टा हिँडेर आएको, टाढा छ, ढिला त भैहाल्छ नि, अरु पनि आउँदै होलान् ।’
विद्यालय पढाउने शिक्षक कति बजे स्कुल पुग्नुपर्छ ? निश्चय पनि सवा दश बजे होइन । तर, भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित बाल शिक्षा सदन आधारभूत विद्यालयका शिक्षकलाई भने दश बजे आउनुपर्छ भन्ने नभएको स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा भटिएको छ । उनीहरुलाई जति बजे आए पनि हुने, अनि जति खेर गए पनि हुन्छ ।
‘यहाँ त यस्तै हो, शिक्षकहरु आफूलाई मन परेको बेला आउँछन्, मन परेको बेला जान्छन्, बच्चाको त मतलबै राख्दैनन् ।’ विद्यालयकै प्राङ्गाण्मा भेटिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशब खड्काले भने । उनी विद्यालयको भवन बनाउनका लागि गर्नुपर्ने निर्णयको माइन्यूटमा सही गर्नमात्र आएका हुन् ।
उनीसँग विद्यालयका शिक्षकहरु समयमा नआउनुको कारणबारे सोधीखोजी गरिरहँदा देखिए, अर्का शिक्षक । उनी विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक कपिलप्रसाद पराजुली रहेको विव्यस अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।
‘यहाँ त यस्तै हो, शिक्षकहरु आफूलाई मन परेको बेला आउँछन्, मन परेको बेला जान्छन्, बच्चाको त मतलबै राख्दैनन् ।’
उनीसँग पनि विद्यालयमा ढिला आउनुको कारणबारे सोध्दा उनको मुख रातो बन्यो, उनी नाजवाफ भए । उनले विद्यालयका पढाउने शिक्षकहरु विभिन्न बहाना बनाएर स्कुल नआउने गरेको बताए । विव्यस अध्यक्ष खड्काका अनुसार उनी विद्यालयमा कुन शिक्षक, कति खेर आए, कति खेर गए भन्ने जिम्मेवारी लिएका शिक्षक पनि हुन् ।
‘त्यो जिम्मेवारी लिएका शिक्षक त यस्ता छन् भने अरु शिक्षक के होला ?’ विव्यस अध्यक्ष खड्काले सोधे । त्यसको पनि कुनै जवाफ आएन । त्यसपछि सहायक प्रअ पराजुलीले एक जना मिस नआएको, अर्को मिसको नन्दको बिहे भएकोले नआएको बताउँदै तिनीहरुसँगै आउन विद्यार्थी पनि नआउँदा विद्यार्थी संख्या थोरै भएको बताए ।
विद्यार्थीलाई लाइन राखियो, सो क्रममा जम्मा ३३ जना विद्यार्थी उपस्थित थिए भने शिक्षकहरु तीन जना । सोही क्रममा प्रअ रुद्र खत्री पनि हातमा कपी लिएर आए । साढे दशबजेको हाराहारीमा विद्यालयमा देखिएका प्रधानाध्यापक खत्रीले आफू व्यव्स्थापन समितिका पदाधिकारीको घरघरमा माइन्यूट बोकेर सही गराउन हिँडेकोे कारण ढिला भएको बताउँदै अरु बेला ढिला हुने नगरेको बताए ।
सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १० चित्तपोलको सल्लाघारीमा रहेको उक्त विद्यालयका शिक्षकहरुकै लापरबाहीको कराण विद्यालयमा दिनानुदिन विद्यार्थी घट्दै गइरहेको छ ।
इसिडीदेखि कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा मुश्किलले ४० जना विद्यार्थी छन् तर हाजिरी रेकर्डमा भने ६० जनाको हाराहारीमा छ । विद्यालयमा इसिडी कोटामा २, प्रावि तहमा ८ र निमावि तहको कोटामा १ गरी र अझ निजी स्रोतबाट २ जना गरी १३ जना शिक्षक रहेका छन् ।
उक्त विद्यालयको अवस्था नाजुक रहेको सोही वडाका वडाध्यक्ष शिवराम राउतले स्वीकारे । उनल विद्यालय टाढा भएकोले शिक्षकहरु ढिला पुग्ने र चाँडो फर्किने गरेको हुन सक्ने बताउँदै त्यसको अनुगमन गर्ने पनि बताए ।
स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको अधिकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा शिक्षककै लापरवाही भएसम्म सुध्रिने छाँटकाँट देखिँदैन । सो विद्यालयको अवस्थाले सरकारी स्कुलप्रति अभिभावका वितृष्णा अरु कारणले नभएर शिक्षककै कारण फैलिएको मान्न सकिन्छ । शिक्षकमा जिम्मेवारी बोध नहुँदा २०१७ सालमा बनेका उक्त विद्यालयको हाल बेहाल बनेको छ । यसबारेमा वडाध्यक्ष राउतले चासो दिने बताए पनि त्यो चासो के हुने हो ? अनविज्ञ छ सबै ।
शिक्षामन्त्रीको नजरमा परेका ‘माष्टरहरु’
विद्यालयका सात आलोचना